FALANQEYN CUSUB: Puntlandtimes oo dib u eegis ku sameysay Jawaabaha laga bixiyey Warmurtiyeedkii Kismaayo ka soo baxay? – PUNTLANDTIMES- KA DHIGO ISHA WARARKA EE CAALAMKA & SOMALIA
Home 2017 October Wararka Maanta, Warbixino FALANQEYN CUSUB: Puntlandtimes oo dib u eegis ku sameysay Jawaabaha laga bixiyey Warmurtiyeedkii Kismaayo ka soo baxay?
FALANQEYN CUSUB: Puntlandtimes oo dib u eegis ku sameysay Jawaabaha laga bixiyey Warmurtiyeedkii Kismaayo ka soo baxay?
MUQDISHO(P-TIMES) – Si weyn ayaa loo falanqeeyey go’aamadii ka soo baxay shirkii hogaamiyaasha Madasha Wadatashiga Dawlad gobaleedyada dalka oo ku soo dhamaaday magaalada Kismaayo, waxaana laga soo saaray warsaxaafadeed ay ku qornaayeen 16 qodob oo waa weyn, kuwaas oo badankooda ku wajahnaa dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Madaxda dawladda Faderaalka, Xildhibaano katirsan baarlamaanka, Siyaasiin, Xeel-dheerayaasha Siyaasadda iyo Warbaahinta ayaa siyaabo kala duwan uga faalooday qodobada soo baxay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqad laga soo diray Xaafiiskiisa, warbaahintana loosoo marsiiyey dhinaca Ciwaanadooda ama Emailada waxaa lagu baaqay Midnimo & Wada shaqeyn.
Madaxweyne Farmaajo ma cadeyn mawqifka dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, wuxuuna sheegay in ay jiraan caqabado ay doonayaan in xal rasmi ah laga gaaro, laakiin ma sheegin mana qaadan doorkii laga sugayey oo ahaa in uu jawaab cad bixiyo.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo lagu tuhmayo bud-dhigaha khilaafyadan curtay iyo shaqsiyaadka lagu tuhmayo mashiinka dawlad gobaleedyada & Dawladda Faderaalka isku diraya ayaa xalay mar kale cirka ku shareeray sheekada iyo xiisadda taagan.
Mr, Kheyre ayaa sheegay in laga gudbay xiligii Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada iyo shaqsiyaad gaar ah ay hor istaagi lahaayeen mustaqbalka Soomaaliya waxa ugu yeeray, laakiin wuxuu u muuqday nin si adag isku difaacaya aaminsani wali fikradda laga soo horjeestay.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa si cad u sheegay in shirka Kismaayo uu muujiyey fashilka hogaamineed ee Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna ku baaqayba in laga tashado oo lala yimaado masuuliyadda saaran baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaa Axmed Macalin Fiqi ayaa ku sifeeyey shirkaas mid ay ka soo baxeen go’aamo adag oo xasaasi ah, ayna kamid yihiin goodin, dhab ka hadal, Canaan, Baaq, Talo soo jeedin iyo Muruq-taabasho, loogana baahan yahay marka ay halkaas taagan tahay masuuliyadda waxa dhacay in ay qaadaan Madaxda Soomaaliya.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah ragga sidda joogtada ah falanqeynta ugu sameeya arrimaah Siyaasadda Soomaaliya, ayaa ku sifeeyey shirkan mid muujinaya daganaan la’aan siyaasadeed, loogana baahan yahay dawladda Faderaalka in ay la timaado siyaasad togan oo laga leexdo dhabaha hadda la hayo.
Dad badan oo baraha bulshada falanqeyn ku sameeyeyna siyaabo kala duwan ayay u fasireen qodobada soo baxay, waxay soo jeediyen qaarkood in dawlad gobaleedyadu ay talax-tageen, laakiin dad kale ayaa difaacaya dawlad gobaleedyada kuna eedaynaya dawladda Soomaaliya in ay gashatay kabo ka waa weyn.
Daganaansho siyaasadeed oo yar ayaa ka jiray Soomaaliya bilihii lasoo dhaafay, laakiin markale ayay xiisadu u muuqataa mid cirka isku shareertay, waxaana halis ah in daganaanshaha Amniga uu si adag u sameeyey, taas oo aan la ogaan karin waxyaabaha ka dhalan karra sidda ay hada ku socdaan.
2 Fikrad Ayaa Laga Bixiyay Warkaan “FALANQEYN CUSUB: Puntlandtimes oo dib u eegis ku sameysay Jawaabaha laga bixiyey Warmurtiyeedkii Kismaayo ka soo baxay?”
mohamed sulub October 12, 2017 at 3:29 pm · Edit
waxan layabsanahay dadka somalida sida Aqontodu tahay & sida aay uga jawabeb shirkii magalada kismanyo 5 mamul gobaled qodobada kaso baxay,waxan maqlay dad badan oo arinkas dhalilaya,dadksa waxan ukala qaday dhawr ujedo kuwo danohoda ku haysta mamulka khayre,& kuwo dameri dhan racday ah oo aan fahmin waxa mesha ku jira oo masulinta 5 madaxweyne gobaledyada.
abdiwel October 12, 2017 at 5:53 pm · Edit
kheyre waa nin albaaka dambe kasoo galay dowladnimada somaaliya isagoo si fudud uu ugu sahlay saaxiibkiis farmaajo.